Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo lagu wareejiyay gaadiid dagaal iyo ciidamo beeleedyo – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo lagu wareejiyay gaadiid dagaal iyo ciidamo beeleedyo
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Magaalada Gaalkacyo ayaa shalay waxaa lagu wareejiyay gaadiid dagaal iyo ciidamo beeleedyo ku sugnaa Magaaladaasi.
Beel kamid ah kuwa Dega Magaalada Gaalkacyo ayaa shalay Madaxweynaha Galmudug waxa ay ku wareejiyeen maleeshiyo beeleed iyo gaadiid dagaal iyo hub , waxaana Ciidankaasi ay kamid noqon doonaa kuwa Maamulka Galmudug.
Waxgaradka Ciidanka iyo hubka ku wareejiyay Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay ka go’an tahay la shaqaynta maamulkooda isla markaana ciidamada beeshaasi ka tirsanaa xiligaan waxii ka dambeeya ay mas’uul ka tahay maamulka Galmudug kuna wareejiyeen iyaga iyo hubkooda.
Madaxweynaha Galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed ayaa uga mahad celiyay beesha hubka iyo ciidanka ku wareejiyay, waxa uuna balan qaaday in ciidankaasi ay kamid noqon doonaan kuwa Maamulkooda ayna heli doonaan xaquuqda ay leeyihiin ciidamada kale ee Maamulka.
Maamulka Galmudug ayaan wali lahen ciidan rasmi ah marka laga reebo Maleeshiyada ku sugan inta badan deegaanada Maamulkaasi, waxaana socda qorshe maleeshiyaadkaasi looga dhigayo ciidan maamulka uu leeyahay loona furayao tababar ciidanimo.
Xildhibaan Dahir Amiin Jeesow ayaa ku baaqay in Baarlamaanka uu soo saaro qaraar dalka looga saarayo Ciidamada Kenya
ku lug lahaanshaha ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya jooga ganacsiga sharci darada ah ee Sokorta iyo Dhuxusha
Xafiiska Warfaafinta ee Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay qaraxii Maanta Magaalada Muqdisho lagula beegsaday Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu.
Qaraxa oo ahaa mid Is-miidaamin ah oo uu fuliyey qof isku soo xiray Jaakad waxyaabaha qarxa ayaa waxaa gaari uu watay Afhayeenka Xukuumadda Macalimuu lagula beegsaday meel ku dhow Isgoyska Dabka ee Muqdisho, xili uu doonayey inuu gaariga kasoo dego.
Qoraal kooban oo lagu daabacay Xafiiska Warfaafinta ee Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa waxaa lagu sheegay in dhaawaca soo gaaray Macalimuu uusan aheyn mid halis ah, isla markaana uu yahay dhaawac fudud.
Xaaladda Caafimaad ee Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa la sheegay inay wanaagsan tahay, uuna Caafimaad qabo, sida ay sheegeen dhaqaatiirta ku howlan la tacaalida xaaladdiisa ee Isbitaalka Digfeer ee Magaalada Muqdisho.
Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay soo gaartay in la duqeeyay Xarumo Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee Maamulka Jubbaland.
War-saxaafeed kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ka xun tahay falka lagu duqeeyay Xarumaha Hormuud, waxaana tacsi loo diray Shirkadda oo duqeynta kasoo gaartay burbur.
Wasaaradda ayaa sheegtay inay xiriir la sameeyneyso Ciidamada AMISOM iyo saaxiibada kale ee dowladda Soomaaliya ka taageera howlgalada amniga, si dowladda ula wadaagto dareenkeeda, loona ogaado sababta loo duqeeyay Xarumaha Shirkadda.
Sidoo kale Xukuumadda ayaa tilmaamtay in dowladda Federaalka ay baaritaano rasmi ah ku sameeyn doonto dhacdooyinka soo noq-noqday ee lagu waxyeelaynayo shacabka Soomaaliyeed, iyadoona Wasaaraddu u mahadcelisay saaxiibada ka taageera amniga.
Warka kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga laguma sheegin cidda duqeynta u geysatay Xarumo Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, hayeeshee waxaa loo maleynayaan inay yihiin diyaaradaha Kenya oo dhowr jeer oo hore duqeeyay Xarumo ay leedahay Shirkadda Hormuud.
Hoos ka Akhriso Warka ay soo saartay Wasaaradda Gaashaandhigga.
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidamada Itoobiya ee katirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab waxaana uu ka dhacay degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab weerareen Saldhiga Ciidamada Itoobiya ee degmada Xudur, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaaro dhaawac ah, iyada oo dagaalka siwyen looga maqlay gudaha iyo daafaha degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada Itoobiya ay madaafiic ku garaaceen dhinaca uu weerarka kaga yimid, balse aan weli la cadeyn khasaaraha ka dhashay madaafiicda.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Xudur ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid degan, waxaana Saldhigyadii la weeraray ku sugan Ciidamada Itoobiya.
Isfaham Hordhac ah Oo laga Gaaray Khilaafkii Maamulka Puntland & PSF.
Booliska Oo Gacanta Ku Dhigay Guri ku yaalla Muqdisho oo lagu Beeray Xashiish.
Ra’iisul Wasaarihii Dalka Suudaan Oo iska Casilay Xilkii.